October 12th, 2018 Iftiinshe
Xog ay bixiyeen saraakiisha amaanka ee dowlada Turkiga ayaa sheegaya inay heleen cod iyo muuqaal cadeenaya in Sirdoonka Sacuudiga ay Qunsuliyadooda Istanbul ku dhex dileen suxufi Jamal Khashoggi. Qaar kamid ah Warbaahinta Dowlada Turkiga ayaa xaqiijiyey in si qarsoodi ah laamaha amaanka u tuseen qaar kamid ah muuqaal iyo cod laga duubay jirdilkii iyo dilkii loo geystay suxufigaasi oo la sheegay in lagu dhex dilay Qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay Istanbul 2dii bishan Oktoober.
October 11th, 2018 Ruugcadaa
Putin Ayaa Casuumay Khabib Si Qurux Badan Uga Guulaystey Feedhyahankii Irishka Ahaa, Istuska Ahaa Shacbiyada Weyna Lahaa
Maamul goboleedyadii oo maraya inteen ka baxnaa meel alle
Waxaa jiray warar sheegaya in abdiwali gaas , shariif hassan iyo ahmed maodobe ay magaalada nairobi kula shiri rabeen gudi ka socda beesha caalamka asbuucii lasoo dhaafay.
Sheekadii Dhexmartay Raisalwasaare Khayre Iyo Boqorka Sucuudiga
October 10th, 2018 Ruugcadaa
RW Kheyre: Waxaan rabnaa iskaashi wax wada qabsi. Waxaan leennahay dhul dihin oo wax walba laga beeri karo,sidoo kale xoolaha aan dhoofinno ayaan rabnaa in aad naga qaadataan tiro ka badan intii hore.
Mashruuc lagu ballaarinayo dekedda Berbera oo la dhagax dhigay
Mashruuc lagu balaarinayo dekedda Berbera ayaa maanta munaasabadiisa dhagax dhigga lagu qabtay xarunta dekeadda.
Ina Kaahin Oo Feedhay Horgal Gar-Gaar
Warbaahinta Aljazeera Oo Shaaciyey Muuqaalo Muujinaya Qaabkii Loo Khaarajiyey Weriyihii Sucuudiga Ahaa
Warbaahinta afka dheer ee AlJazeera ayaa soo bandhigtay warbixinoiyo sawiro ay heleen dowlada Tukrigu kuwaa oo ah 15 kii nin ee khaarijiyey Sixifigii Sucuudiyaanka ee Safaarada Sucuudiga ee Turkiga lagu dhex diley Talaadadii la soo dhaafey .
October 9th, 2018 Iftiinshe
Qoraagii Jamal Khashoggi Ee Dhaliili JIrey Xukumadda Sucuudiga Ayaa La’ Layahay
Turkey oo sucuudiga ka dalbaday ogolaansho ay kaga baadhaan qunsuliyada Sucuudiga ee Istanbul Jamal Khashoggi raq iyo ruux mid uun.
Dowlada Turkiga ayaa codsatay in ogolaansho sucuudigu u siiyo baadhitaan inay ku sameeyaan dhismaha safaarada oo uu markii ugu danbeeyay galay qoraaga dhalashadiisu sucuudiyaanka tahay ee sida weyn u dhaliili jiray taliska sucuudiga.
Faallo : “Dib ayaan Soomaaliya ula midoobi doonnaa” Iskama imaan hadalka Dr. Edna Adam.
Dhawaan wareysi ay VOA-da la yeelatay Dr Edna, oo hore Wasiirka Arrimaha dibedda ee Somaliland u soo qabatay waxa ay ku sheegtay hadallo farxad galiyey laabta qof walba oo Soomaali ah. Weydiin ay Sahro Ciidle Nuur oo wareysiga qaadeysay ku tuurtay Adna ayaa u dhigneyd sidan: “Suurtagal ma tahay in Somaliland markale Soomaaliya isku noqdaan oo la’isu yimaaddo?”
Nuux Taani Oo Sigtay Xilli Uu Ceerigaabo Ku Sugnaa
October 9th, 2018 Ruugcadaa
Wararka aanu ka helayno shakhsiyaadka sida dhow ugu xidhan jabhadda uu wato Jamaal Baaxad waxay weerar ku qaadeen kooxdii uu horboodayey Nuux Taani…
Waaxaan halkan ku soo bandhigaynaa barnaamij aad u xiisa badan oo ka mid barnaamijkii taxanaaha ahaa ee aad horay u daawateen, Ee ku saabsanaa wax tarka geela ee uu soo saaray Igarre yaasiin xaaji Muuqaalkan oo daba socda kuwii horay aaanu u baahinay kuwa kalana ay ka danban doonaan waxaad ugu bogan doontaa qodobo kala gadisan, Oo mid kastaa uu wato xiiso dheeriya,
Feedhyahan Soomaaliyeed Oo Ka Soo Jeeda Gobolka Sool
October 8th, 2018 Ruugcadaa
Abdifataax Rashiid Sowdhac oo ah Feedhyahan soomaaliya ah oo ka soojeeda Gobolka sool.
Oo haysta dhalashada ingiriiska dhawaana ku guulaystay feedhka miisaanka fudud ee qaarada Yurub isaga oo matalaya UK.
JAAJUUS SIYAASI AH
JAAJUUS SIYAASI AH: Xiise goonni ah ayay leeyihiin Filimaanta ku qotoma dhacdooyinka runta ah, Filimaanta buugaagta laga dheegto ama goob-joogayaal nool laga qoro. Mid kuwaas ka mid ah ayaa caawa i dhibay oo dacar iyo ladh igu kiciyey ‘#The_Angel’ Malag-na maaha ee waa Jaajuuskii dalkiisa dibin-daabyeeyey ee #Ashraf_Marwaan.
Dowladda Turkiga oo sheegtay in gudaha qunsuliyadda Sacuudiga lagu dhex dilay wariyihii la la`aa
October 7th, 2018 Iftiinshe
War cusub oo kasoo baxay dowladda Turkiga ayaa waxaa uu sheegayaa in wariyihii Sacuudiyaanka ahaa ee lagu la`aa magaalada Istanbul Jamal Khashoggi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga xilli uu halkaasi ka doontay warqado la xiriira arrimo guur. Wariyahan oo ahaa mid dhaleeceeyay dowladda Sacuudiga ayay dowladda Turkiga sheegtay in ay u badinayaan in ay dileen koox laga soo diray dalka Sacuudiga kuwaas oo qunsuliyadda ku dhex dilay islamarkaana meydkiisa ku qaaday baabuur badow.
Saraakiil dhameystay tabbabar ay u fidinayayeen ciidammada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya
Xarunta dugsiga tabbabarka Turkiga ee magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay xaflad tabbabar loogu soo xirayay ciidaan isugu jira saraakiil iyo saraakiil ku-xigeen oo muddo sannad ah tabbabar ku qaatay saldhiga tabbabarka ciidammada Turkiga ee Turkisom. Wasiirka gaashandigga dowladda Soomaaliiya Xasan Cali Maxamed iyo taliyaha xooga dalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda lagu dhaarinayay cidaankaasi oo ah inay si rasmi ah ugu biirayaan ciidanka xoogga, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Sonna.
Fashilaadii Khaatumo Khiyaano Kooxo Kale Ayaa Bedelay!!!
October 6th, 2018 Ruugcadaa
Markii aad looga yaabay kooxdii horboodaysey hogaankii SSC oo isagu xabad mooyee aan afka hadalkaba aqoonin, waxaa qoorta iskaga maray oo saqiir suujiyey kooxdii boorsooyinka watay iyo suudhadhka madow, si aan heerka daacadnimadoodana loo fahmina shacabka u soo xidhay muraayadaha madmadow.
Sacuudiga oo kordhiyay ka tarxiilida Soomaalida dalkiisa,tan iyo markii uu soo baxay Khilaafka Khaliijka.
Waxaa maanta duhurtii magaalada Muqdisho la soo gaarsiiyay Soomaali fara badan oo laga soo tarxiilay Dalka Sacuudiga, iyadoo dadkaasi tarxiilka ahaa ay dalka keeneen laba diyaaradood.
Cabqarigi Weynaa Ee Ustad Sayid M. Cabdille Xasan Iyo Sidii Xabaashii Looga Saaray
Ingiriiska: Wiil Soomaali ah oo loo xukumay darooga uu uga ganacsan jiray dalkaasi
October 5th, 2018 Ruugcadaa
Nin daroogada ka ganacsada oo dhallinyaro u kaxeystay si ay ugu iibiyaan maandooriyeyaasha heroin-ta iyo cocaine-ta isagoo adeegsanaya “isgaarsiinta taleefanka” ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi ah.
Maxaad ka ogtahay qoyska Trump? Waalidkiis iyo walaalihiis
Qoyska madaxwayne Donald Trump ayaa mar kale ay diiradda saaran tahay, balse markaan waxay haysaa waalidiintiis iyo walaalihiis.
Aqoonyahan Cismaan Khayre Oo Waraysi Aad Xaasaasi U Ah -Video
October 4th, 2018 Ruugcadaa
Aqoonyahan Cismaan Khayre Oo Ka Mid ah shakhsiyaadka sida farakutiriska ah hadh iyo habeen heeganka ugu ah ka warbixinta xaaladaha dhabta ee ka jira deegaanada SSC, balse markan wuxuu shiishka saarayaa doorashada Puntland ee soo socota.
Read Carefully And Dont Forget It
Dear mum, If the law was fair today you would be here seated next to me waiting to be electrocuted in the electric chair, but since the law is blind I have been convicted for the crimes we committed together.
Xasan Shiikh tallaabo habboon ayuu hore u qaaday.
October 3rd, 2018 Ruugcadaa
Bulshada Soomaaliyeed oo badankoodu hadda 65% Ku dhawaad ka hooseeyaan dada 35 haddaanay ka badnayn kama warqabaan si qoto dheer loolanka fikradeed ee Soomaalidu soo martay 40 sanno ee ugu danbaysay, is-hardinka fikradeed ee xilliyaddii ugu danbeeyey dhacayeyna waxay salka ku hayeen fikrado xanbaarsan ajandayaal dalka dibadiisa ka soo burqaday.
Igarre Yaasiin Iyo Barnaamij Ku Saabsan Sida Kenya Xoolaha Nool Loo Kala Iibsado -VIDEO
Iggarre Yaasiin waa wiil soomaaliyeed oo ku nool wadanka Kenya, waana ragga sida weyn u soo bandhiga hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, hase ahaatee wuxuu qaybtan ku soo bandhigayaa sayladaha Kenya iyo sida xoolaha nool loo kala iibsado.
Cabdimaalik Coldoon Bay Xabashidu Kala Baxday Hoygii Jigjiga Laga Dejiyey -VIDEO
Warar aan ilaa hada la xaqiijinin waxay sheegayaan Samafale Cabdimaalik Coldoon oo u ambabaxay magaalada Jigjiga ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey, waxaana la dejiyey Hoygii loo sii qorsheeyey, ka dibna maxaa dhacay?
Toddobaadkan labo qof oo Soomaali ah ayaa ku geeryooday dalka Switzerland,sida ay xaqiijiyeen jaaliyadda Soomaalida.
Dhawaan waxaa dalka Indonesia mar kale ku dhuftay dhulgariir badda hoosteeda ka dhacay (Tsunami), kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 800 oo qof.
October 2nd, 2018 Ruugcadaa
Dhacdadan oo kale ayaa isla xeebaha dalkaas ka dhacday 14 sano ka hor, markaasoo ay saamaynteeda soo gaartay inta badan xeebaha saaran badweynta India, oo kuwa Soomaaliyana ay ku jiraan.